कलाकार पनि एउटा समाजसेवी नै हो, त्यो कुरालाई मान्छेले किन नबुझेको ? : कलाकार तथा निर्देशक विक्की पुलामी - Sawal Media
कलाकार पनि एउटा समाजसेवी नै हो, त्यो कुरालाई मान्छेले किन नबुझेको ? : कलाकार तथा निर्देशक विक्की पुलामी
निरंकुशताको बन्धन एउटा कलमबाट तोड्न सकिन्छ भन्ने कुरा कहिले बुझ्ने हामीले
हरेकको चहाना हुन्छ हिरो बन्ने, तर पुरा सबैको हुदैन । तर, पर्दा अगाडी सफल भइसकेको व्यक्तिले पर्दा छोडेर पर्दा पछाडीबाट काम गरेको भन्दा अचम्म लाग्न सक्छ । तर आज त्यस्तै एक जना व्यक्ति सँग हामिले कुरा गरेका छौँ । पछिल्लो समय मोडलिङ छोडेर निर्देशनमा सक्रिय रहनु भएका एकजना कलाकार त्यो पनि नेपालमा नभई अमेरिकामा बस्दै आउनु भएका खडग बहादुर पुलामी (विक्की) सँग सवाल मिडीयाका अनलाईन रिपोर्टर नरेश चौलागाईले स्काइप मार्फत कुराकानी गर्नु भएको छ ।
परदेशको व्यस्त जिवन सँग रमाउदै छु, नियमित काम म्युजिक भिडियोहरु निर्देशन अनि स्टेज कार्यक्रम हरु होस्ट यस्तै वितिरहेको छ ।
नेपालमा मोडलिङमा तपाइको माग बढ्दै गर्दा चटकै माया मारेर अमेरिका पलायन हुनुभयो प्राय कलाकार नेपालमा टिक्दैनन किन ?
पलायन भन्दा पनि अध्ययन र सिकाइ महत्वपुर्ण भएकोले सिक्न कै लागी अमेरिका आयको हुँ । केहि सिकाइ पछी पुन नेपाल नै फर्कियर यही छेत्रमा नै योगदान पुर्याउने मेरो उदेश्य हो । अब सबैको आ–आफ्नो धारणा र बाध्यता हुन्छन् त्यही कुराले नै अमेरीका केही समय बस्न बाध्य बनायको हुन सक्छ । तर पहीलेको तुलनामा अहीले यो क्षेत्रमा धेरै सम्भावना छ ।
नेपाल छोड्नुभयो तर कलाकारीता छोड्नु भएन, तर समाजसेवा त छोड्नु भयो नि होइन ?
नेपाल छाडेको हैन, जसरि सर्लाहीबाट काठमाण्डौँ धेरै कुरा सिक्दै आफु लाई परिपक्व बनाउने उदेश्यले आएँँ, त्यही उदेश्य पुरा गर्दै जाने क्रममा अमेरिका सम्म आइपुगेको हुँ । अनि कलाकारिता बिना त जिबन सोच्न पनि सकिन्न होला । मलाई लाग्छ म जन्मेको नै कलाकारिताको लागी हो जस्तो लाग्छ । नभए म सुरुमा एउटा खेलाडी थिएँ । म करातेमा ब्लाक बेल्ट हाँसिल गरेको खेलाडी हुँ । पछी आएर स्वयम्सेवा, युवा नेतृत्व र समाजसेवामा लामो समय काम गरेको मान्छे एक्कासी कलाकारितामा प्रबेश गरी नेपालमा राम्रो हुने समयमा यता आयर पनि कलाकारिता (म्यूज़िक भिंडियों निर्देशन, अभिनय, स्टेज कार्यक्रम प्रस्तोता) लाई नै निरन्तरता दिनुले पनि स्पस्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ ।
अनि समाजसेवा छाडेको हैन, मलाई लाग्छ समाजसेवा भनेको कुनै सामाजिक सँगठन खोल्दै मा र आबद्ध हुँदैमा समाजसेवा हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । समाज सेवाको अर्थ भनेको नै समाज को सकारात्मक विकासमा असल कार्य गर्नु हो । त्यसैले एउट असल समाज निर्माण हुनु लागी कला, संस्कृति, परम्परा, भेषभुषा, रहनसहन, परिवार लगायत अन्य धेरै कुराहरुको समिश्रण हो, त्यसैले कुनै पनि मान्छेले जुन सुकै क्षेत्रबाट पनि समाज सेवा गर्न सक्छ र सामाजिक कार्यलाई निरन्तरता दिन सक्छ, त्यसैले मैले पनि समाजसेवा गर्ने शैली मात्र परिवर्तन भएको हो समाजसेवाबाट टाढीएको होइन ।
तपाईं कलाकारीतामा आउनु भन्दा पहिला एउटा समाजसेवा मा पनि हुनुहुन्थ्यो नि होइन ?
हो, त्यो भन्दा पनि पहिला म एउटा कराते खेलाडी थिएँ र पछि युवा स्वयम्सेवा, युवा नेतृत्व, र स्टेज कार्यक्रमहरु चलाउथे । तर मलाई त्योबेलामा पनि आफुलाई कलाकार नै भएको हेर्न चाहन्थेँ ।
त्येसो त तपाईको बिचारमा समाजसेवा निरर्थक कार्य हो ?
निरर्थक कसरी हुन सक्छ ? समाजसेवा नै त्यस्तो एउटा माध्ययम हो जस द्वारा मान्छे हरेक समय सकारात्मक हुदै आफ्नो हृदयको विकासको स्तर बृद्धी गर्न सक्छ । अर्कों भाषामा भन्दा एउटा मान्छे समाजसेवाको कार्य बाट मात्रै परिपक्व हुन सक्छ, अर्थात समाजको एउटा असल अभिवाबक बन्न सक्छ । मैले पहिले नै भने नि, कलाकार पनि एउटा समाजसेवी नै हो । त्यो कुरालाई मान्छेले किन नबुझेको ? समाजसेवा भन्ने वित्तीकै २–४ वटा कार्यक्रम गर्ने र फोटो खिचेर फेसबुक भर्ने लाई मात्र मान्ने हाम्रो मानसिक्ता कहिले हटाउने । निरंकुशताको बन्धन एउटा कलमबाट तोड्न सकिन्छ भन्ने कुरा कहिले बुझ्ने हामीले।
अब फेरी म तपाईलाई तपार्यको कलाकारीताको वियमा नै कुरा गर्छ । मोडलबाट निर्देशनमा मोडिनु भयो, निर्देशनका फैदा के छ्न ?
निर्देशन मेरो पहिले देखी कै चाहना हो, त्यो चाहना लाई मैले यहाँ परदेशमा आयर पूर्णरुप मात्र दिन खोजेको हुँ । फाईदा भनेको आफ्नो सृजनालाई अरुसामु सामु पुर्याउन पाउनु अनि अझै धेरै सृजनशील हुनु हो तपाईले आर्थिक पाटो कोट्याउनु भएको होला अहिले निर्देशकले खासै पैसा कमाउदैनन् बरु मोड्लिङ, प्रोड्युसिङमा बढी पैसा होला । निर्देशन त एउटा सोख हो त्यही पुरा गरेको हुँ मैले ।
प्राय निर्देशक पर्दा पछाडी नै हुन्छ्न, उनीहरुको पहिचान अदृश्य हुन्छ । अधिकांस मान्छे पर्दामा देखिन चहान्छ्न तर तपाईले पर्दा छोडेर पर्दा पछाडी बाट कलाकारीता गर्दै हुनुहुन्छ राज के हो ?
समय, परिस्थिति र वातावरण अनुसार आफुलाई डोर्याउन मात्र खोजेको हुँ । आफुले निर्देशन गरेको म्युजिक भिडियोहरूमा आफै पनि अभिनय गरीरहेको हुन्छु ।
तपाई आफुलाकिई के भन्न रुचाउनु हुन्छ ? खेलाडी, समाजसेवी, मोडल कि निर्देशक ?
जसरी चिन्न चाहनु हुन्छ म खुशि हुन्छु । जसले जसरी चिन्नु हुन्छ म त्यही हुँ र त्यही भन्न रुचाउछु । तर आफ्नो भाषामा भन्नु पर्दा म एक “सचेत युवा” हुँ ।
बसोबास रहेकै स्थानमा दशैँ मनाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयकाे आग्रह
ज्योतिषले देउवालाई भने, ‘चैत ३१ देखि असारसम्म सावधान हुनुस्, एकतन्त्री शासन आउन सक्छ’
संसद विघटनपछि गरिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तार तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
मन्त्री छान्न र महाधिवेशनको छलफल गर्न देउवाले बोलाए पदाधिकारी बैठक
५० प्रतिशत नेपाली जनता भन्छन्, ‘राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचारी !’
तामाकोशी नदीको बहाव हालसम्‍म पनि स्‍थिर, सतर्कता अपनाउन प्रशासनको अपिल
ललिता निवास जग्गा प्रकरण : भाटभटेनीका सञ्चालक गुरूङ २ करोड धरौटीमा रिहा